Somaliland News - Kharashka Lagu Qabanayo Doorashada Deegaanka ee miisaaniyada Sanaka 2007ka oo muran ka taagan yahay
Kharashka Lagu Qabanayo Doorashada Deegaanka ee miisaaniyada Sanaka 2007ka oo muran ka taagan yahay
27 Feb, 2007 - Hargeysa � Miisaaniyadda Sanadka 2007ka oo hadda hortaalla Golaha Wakiillada Somaliland ayaa la xaqiijiyey in aanay ku jirin wax kharash ah oo loogu talagalay doorashada Golaha Deegaanka. Waxaana soo baxay muran iyo asaraar u dhexeeya Wasiirka Maaliyadda, mudane Cawil Cali Ducaale iyo shaxda kharashka Miisaaniyadda ee loo qaybiyey mudanayaasha Golaha Wakiillada.
Wasiirka Maaliyadda, mudane Cawil oo shalay hortegey Guddida Dhaqaalaha iyo Ganacsiga ee Golaha Wakiillada, isla markaana kulan dheer oo albaabadu u xidhan yihiin kula yeeshay xafiiskooda, xarunta Golaha Wakiillada, ayaa kadib, weriyayaal ka socdey Telefishanka Madaxa bannaan ee SLTv waxay weydiiyeen, wararka sheegaya in aanay miisaaniyadda ku jirin kharashkii Doorashada Golayaasha Deegaanka. Waxana uu sheegay wasiirku in warkiisi uu yahay mid aanay waxba ka jirin; kharash loogu talagalay doorashada Golayaasha Deegaankuna ay ku jirto miisaaniyadda.
Wasiirka oo ay weriyayaashu weydiiyeen kharashka loogu talagalay doorashada Deegaanada ee ku jira miisaaniyaddu inta uu dhan yahay, waxa uu sheegay in uu la mid yahay kharashkii hore loogu isticmaalay doorashooyinkii hore. Markii su�aashaas lagu celceliyeyna waxa uu wasiirku carrabka ku dhuftay in kharashka Miisaaniyadda ugu jira doorashada Golayaasha Deegaanku ay gaadhayso ilaa 2 Milyan oo Doolar.
Hase yeeshee, xubnaha Guddida Dhaqaalaha oo sidoo kale, weriyayaashu weydiiyeen kharashka doorashada Golayaasha Deegaanka ayaa sheegay in aanay ku jirin miisaaniyadda, ayna ka mid tahay arrimaha ay Wasiirka Maaliyadda ugu yeedheen ee ay weydiinayeen.
Mudanayaasha Guddida Dhaqaalaha oo ay weriyayaashu weydiiyeen in Wasiirka Maaliyaddu u sheegay in lacagta doorashadu ay ku jirto Miisaaniyadda, waxa ay u soo bandhigeen buugga miisaaniyadda ee nuquladiisa mudanayaasha loo qaybiyey, waxayna sheegeen in wax doorashooyin la xidhiidha ay ku qoran tahay miisaaniyadda kharashka caadiga ah ee sannad walba miisaaniyadda ugu jirta Komishanka Doorashooyinka, balse aanay jirin wax kharash ah oo loogu talagalay doorashooyin oo ku jira miisaaniyadda.
�Wasiirku isagaa sheegi doona halkay lacagtaasi kaga jirto miisaaniyadda, laakiin, halkan waxba kuma qorna, � sidaa waxa jidhi Guddoomiyaha Guddida Dhaqaalaha iyo Ganacsiga, mudane Maxamed X. Maxamuud Cumar-xaashi.
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE, Axmed Maxamed Siilaanyo oo Khamiistii ka hadlayey shir jaraa�id oo uu kaga jawaabayey warqad Madaxweyne Riyaale kaga dalbaday xisbiga KULMIYE inuu soo magacaabo xubinta Komishanka Doorashooyinka ee xisbigaasi soo xulo, ayaa sheegay in Madaxweyne Riyaale aanu ku talagelin in uu doorashooyin qabto, isaga oo xusay in miisaaniyadda dowladda ee 2007 aanay ku jirin wax kharash ah oo loogu talagalay qabashada Doorashooyinka Golayaasha Deegaanka oo la filayo dabayaaqada sannadkan. Waxa kale oo uu sheegay in qaabka muranka badan abuuray ee Madaxweynuhu u maray dhismaha Komishan cusub ay ka mid tahay astaamaha uu u arko in aanay xukuumaddu ku talagelin doorashooyin.
Wasiirka Maaliyadda ayaa la filayaa in Sabtida soo socota uu Golaha Wakiillada hor tago si uu uga jawaabo su�aalaha mudanayaashu ka weydiin doonaan Miisaaniyadda uu golaha horkeenay. Waxaana laga filayaa in arrimaha ugu badan ee wax laga weydiinayaa ay ka mid noqon doonto kharashka xukuumaddu ugu talagashay doorashooyinka Deegaanka, taas oo uu wasiirku sheegay in kharashkeedu ku jiro miisaaniyadda, balse aan lagu arag buugga miisaaniyadda.
Golaha Wakiillada Somaliland ee la soo doortay iyo xukuumadda oo xidhiidhkooda iyo wada shaqayntoodu aanay fiicnayn, tan iyo markii Golahan cusubi hawsha bilaabay ayaa arrimaha ugu waaweyn ee ay iskaga horyimaaddeen waxa ka mid ah muddo kordhintii Golaha Guurtida, taas oo Madaxweyne Riyaale soo jeediyey, isla markaana Golaha Guurtidu isu ansixiyey 5 sannadood oo kale inuu xilka sii hayo.
Hase yeeshee, khilaafkaas, waxaa ahayd dood ka soo horjeedda oo lagaga garhelayey Golaha Wakiillada in miisaaniyaddii 2006 ee ay ansixiyeen aanay ku jirin miisaaniyad loogu talagalay doorashada mudanayaasha Golaha Guurtida, maadaama wakhtigoodu dhammaanayey Oktoober 2006.